‘जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेको छैन’ – Sajha Bisaunee
‘जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेको छैन’
। २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १३:०७ मा प्रकाशित
धीरबहादुर शाही अध्यक्ष, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कस्तो लागिरहेको छ ?
– एउटा जिम्मेवारी थपिएको अनुभूति भइरहेको छ । जुन जिम्मेवारी मैले जनताको सामु पूरा पनि गर्नेछु । चौकुनेका नागरिकलाई मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनु भएकोमा धेरै सुखी छु । सम्पूर्ण चौकुनेबासीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु ।
चुनाव अघि मतदाताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू सम्झना छन् ?
– चुनाव अघि जनता माझ लिएर गएका प्रतिबद्धता हामीले बिर्सेका छैनौं । स्थानीयस्तरदेखि नै घोषणापत्रहरू बनाएका पनि छौं । हामीले जनता माझ गरेका प्रतिबद्धता भनेका पूर्वाधारका विकास, खानेपानी समस्या समाधान, सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, वनजंगल संरक्षण, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, चौकुने गाउँपालिकामा उद्योग करकारखाना सञ्चालन गर्ने हुन् । ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।
चौकुनेका जनताले अबको तीन महिनाभित्र नयाँ के अनुभूति गर्न पाउँलान् ?
– चौकुनेका जनताहरूले अबको तीन महिनामा परिणाम पाउने गरी हामीले काम थालनी गरिसकेका छौं । निवार्चन पछिको बैठक सम्पन्न गरिसकेका छौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालसम्म साविकको गाविस भवनबाट वितरण गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि घरको अरु सदस्यले रकम बुझेर बाटो मै खाइ दिने र मृत्यु भएकाहरूको रकम पनि आइरहेको र हिनामिना भइरहेको अवस्था छ । अबको किस्ताबाट हामीले घर–घरमा गएर सम्बन्धी व्यक्तिलाई नै सामाजिक भत्ता वितरण गर्ने बैठकमा निर्णय गरिसकेका छौं । वनजंगल अनियन्त्रित रूपमा कठान भइरहेको हुँदा काठ निकासीमा रोग लगाएका छौं । खानेपानी, सिँचाइको गुरुयोजना बनाउने र काम अगाडि बढाउने र कृषकलाई फाइदाका लागि माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने छौं । त्यसका लागि जनताबाट सुझाव र विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं ।
चौकुनेमा मुख्य समस्याहरू के देख्नुभएको छ ?
– चौकुने गाउँपालिकाको मुख्य समस्याहरू भनेको गरिबी, बेरोजगार, खनोपानीको अभाव, सडक, बिजुली बत्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतनाको स्तर कमजोर, पूर्वाधारको विकास नहुनु हुन् ।
ती समस्यालाई समाधान गर्न यहाँको योजना के छन् ?
-यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि विकासका पूर्वाधारको गहन रूपमा अध्ययन गरेर गुरुयोजना बनाइ काम गर्नुपर्छ । ठोस रूपमा समस्या पत्ता लगाइ स्थानीयस्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म समन्यवन गरेर समस्या समाधान गर्नेछौं ।
अबको पाँच वर्षभित्रका चौकुने कस्तो बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
-अबको पाँच वर्षभित्रमा चौकुने गाउँपालिका देशभरीमा सबैभन्दा नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउनेछौं । यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, सडक, यातायात, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा चौकुने गाउँपालिका सुविधा सम्पन्न हुनेछ ।
युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै योजना छ ?
-युवा बेरोजगार हुनु नेपाल भरकै समस्या हो । युवाहरू पनि आफ्नो ठाउँमा काम गर्न लाज मान्ने र विदेशमा गएर जस्तो सुकै काम पनि गर्ने गर्छन् । गाउँ ठाउँमा भएका युवाहरू पनि जुवा तासमा दिन खेर फालिरहेका हुन्छन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउनको लागि पहिला ता युवाहरूको मानसिकतामा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नु जरुरी छ । अब चौकुने गाउँपालिकामा कृषि पेशालाई आधुनीकरण गरी व्यवसायी रूपमा सञ्चालन गर्ने र युवालाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजना रहेको छ । कृषि व्यवसायीमा युवालाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्ने र कृर्षि क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा युवाहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र गरिबी निवारण गर्नमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले गाउँबाट काठ निकासी भइरहेको छ । अब त्यो काठ निकासीलाई रोकेर गाउँमा नै फनिर्चर उद्योग सञ्चालन गरी उपभोग्य वस्तु मात्र बाहिर लैजान पाउन व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । अर्काे कुरा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नसकेमा युवाहरूलाई आत्मनिर्भर गराउनमा समस्या हुनेछैन ।
चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि यहाँको पहल कस्तो हुनेछ ?
-अहिले चौकुने सिमेन्ट कारखाना ठेक्का दिएर पनि काम रोकिरहेको अवस्था छ । अब चौकुने सिमेन्ट कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि हामी ठेक्केदारसँग समन्वय गरेर छिटो काम सञ्चालन गर्नेछौं । यसबाट पनि युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले वेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि पनि हाम्रो पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ ।
यदि आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नसक्नु भएन भने ?
– सबैभन्दा पहिले त मैले जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता कहिल्यै भुल्दिन । जनताको माझमा हामीले पूरा गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता गरेकै छैनौं । जुन कुरा हामी पूरा गर्नसक्छौं त्यो कुरामा मात्र प्रतिबद्धता गरेका छौं । फेरि मेरो राजनीति भनेको अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा मात्र होइन धेरै लामो छ मेरो राजनीति । हामीले जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनौं भने अर्काे पटकका लागि जनताको विश्वास गुमाउँछौं त्यसैले राजनीति क्षणिक होइन यो दीर्घकालीन हुने भएकाले हामीले जनतासँग झुटा आश्वासन दिएका छैनौं र जुन प्रतिबद्धता जनता सामु गरेका छौं त्यो प्रतिबद्धता पूरा पनि गरेर देखाउनेछौं ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
चौकुने बासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई आफ्ना अमूल्य भोट दिएर अध्यक्षमा निवार्चित बनाउनु भएकोमा । हामी जनताको शान्त, समृद्ध चौकुने बनाउने त्यो सपनालाई साकार पार्नेछौं । जनताहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ । जुन प्रतिबद्धता जनता सामु हामीले गरेका छौं ती प्रतिबद्धताहरू हामी पूरा गरेरै देखाउने छौं भन्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले जनताको घर–घरमा स्थानीय सरकार भनेर भने पनि अझै पनि स्थानीय सरकारले गर्ने काम र अधिकारका बारेमा ऐन बनिसकेको छैन । एउटा निर्देशिका बनेको छ त्यो निर्देशिकाले हामीलाई सामान्य काम बाहेक अरु कामका लागि अधिकार दिएको छैन । अब स्थानीय सरकारले गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार पाउनका लागि माथिल्लो सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ त्यसका लागि सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु ।
प्रस्तुतीः गीता थापा